Lahatsoratra nataon'i Ivan Roubstov ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Ivan Roubstov
I Ivan Roubtsov dia Lehiben'ny Marketing Officer ao amin'ny orinasa Client Spectrum - orinasa mpanadihady bizina manokana momba ny vahaolana amin'ny Marketing Marketing. Amin'ny maha CMO azy dia tompon'andraikitra i Ivan Spectrum an'ny mpanjifamarika sy fananganana ecosystem teknolojia marketing manodidina azy. Niasa tao amin'ny indostrian'ny AdTech ho an'ny orinasa toa an'i AdGear sy Acquisio izy teo aloha. I Ivan dia mpanaraka mazoto amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny AdTech.
Alarobia 18 Janoary 2017 Alarobia 18 Janoary 2017 Ivan Roubstov
Azo antoka ny milaza fa ny 2016 dia lasa ny fangatahana paositra isan-tsegondra (QPS) ho an'ny Demand-Side Platforms (DSP) sy ny vahaolana amin'ny fividianana haino aman-jery cross-channel. Na DSP afaka mitondra fahitana 500,000 impression / segondra na 3 tapitrisa impression / segondra, ny fahafaha-mividy dia lasa tsy mpanavakavaka fifaninanana amin'ny sehatra fivarotana haino aman-jery rehetra. Androany, ny ankamaroan'ny marika dia mihevitra fa ny DSP dia tokony hampidirina ho azy miaraka amin'ireo fifanakalozana doka lehibe rehetra raha manome ny tratran'ny fantsona farafaharatsiny farafaharatsiny